बाढीले धरानमा ४ घर बगायो – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/बाढीले धरानमा ४ घर बगायो
सुनसरी — अविरल वर्षाको कारण धरानमा सेउती र अँधेरी खोलामा आएको बाढीले चार घर बगाएको छ । तीन दिनदेखि परेको वर्षाले धरान–५ देउराली बस्तीमा सेउती खोलामा आएको बाढीले जितबहादुर लिम्बु, चन्द्र जोगी, तिलक बस्नेतको घर बगाएको हो । अँधेरी खोलामा आएको बाढीले तल्लो देउराली बस्तीस्थित ढकाल टोलको एक घर बगाएको छ ।
खोलाले घर बगाएपछि विस्थापित भएका परिवारका लागि तत्काल राहतको आवश्यकता रहेको स्थानीय डिल्ली लिम्बुले बताए । उनकाअनुसार खोलाले बगाएका घरका सबै परिवार सामान्य मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेहरु मात्र छन् । बस्ने घर नै बगाएपछि बिचल्लीमा परेको उनले बताए । पीडित तिलक बस्नेतले आफ्नो परिवार कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता सुरु भएको बताए । अन्य विस्थापित परिवार छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
धरान–५ का वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बुले खोला किनारको कटान नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा २० थान जालीमा ढुंगा लगाएर छेक्ने काम भइरहेको बताए ।
Breaking News.आज रातिदेखि १४ दिनसम्म लकडाउन घोषणा
३ करोड फ्लोअर्स भएकी नेपाली टिकटक स्टार निशाको भिडियोले हंगामा (भिडियो)
Breaking – कोरोना महामारी बढेको भन्दै फेरि २१ दिन लकडाउन गर्ने घोषणा !
हिजोदेखि आज सुनको मुल्यमा इतिहासमै पहिलो पटक यतिधेरै गिरावट ! हेर्नुहोस कति पुग्यो ।